Izitayile zeendevu-Iingcebiso zeFashoni kumadoda aSisitayile | Amadoda aQinisekileyo
UAlicia tomero | | Chetyiwe, Ukunyamekela, fashion, Imizila
Ngokophando abafazi bathanda amadoda aneendevu phambi kwamadoda achetyiweyo. Kuya kufuneka ubenombono wokuba kukho iliza elikhulu lamadoda enobuso obugcwele ziindevu zazo zonke iimilo kunye nezitayile, ezimfutshane okanye ezirhabaxa, kwaye kungenxa yokuba ngoku icwangcisa imikhwa yomzimba wamadoda.
Ngaba ungomnye wabo bathanda iindevu? Ewe unethamsanqa, kuba abafazi babona la madoda njengabantu ngezakhono zokuzala kunye nempilo entle. Ukuba ucinga ukushiya ezinye iinwele, sinokukunika ezona ndlela zintle kakhulu zokukubonisa ngokuxhomekeke kubuso bakho.
1 Izimbo zeendevu kunye neeklasi
1.2 Uhlobo lweentshebe
1.3 I-Bear okanye i-Hipster Beard
1.4 Iindevu zesimbo esivaliweyo
1.6 Iindevu zesimbo seBandholz
1.7 Uhlobo lukaVan Dyke
2 Uyinxiba njani intshebe kuxhomekeka imo yobuso
Izimbo zeendevu kunye neeklasi
Okulandelayo, sichaza ukuba zeziphi iindevu ezona ziphawula isimbo sazo ngokuxhomekeka kwinkangeleko yazo. Ewe, nganye iya kuxhomekeka kwifukumila kobuso nobuntu bomntu ngamnye. Singafumana ukusuka kwiintsuku ezintathu zakudala ukuya kwiindevu ezixineneyo ezibonakala ngathi azinasiphelo.
Yeyona yendalo, iklasikhi ngaphandle kwamalungiselelo kunokusikwa kwakho onokukufuna. Ukuze ukwazi ukunxiba le ndevu ngobuhle kunye nento ende, kuya kufuneka uthathe uthotho lwezinto onokuzifunda kwicandelo lethu. Ayinayo imfihlakalo enkulu malunga nendlela yokunxiba, Kuya kufuneka uyivumele ikhule kuzo zonke iikona zobuso bakho kwaye ulinde ukuba loluphi uhlobo lokuxinana ekubonelela ngalo.
Olu hlobo luza kuphawulwa kakhulu kwaye lwenzelwe kuphela amadoda athanda ukumakisha isimbo sabo ngomlinganiswa omkhulu oqolileyo. Iqukethe ukuba nemadevu enkulu kwaye ingqindilili emacaleni kwaye Zonke ezinye iindevu kufuneka zinqunyulwe, ngokungathi ziintsuku ezintathu. Umahluko wayo uyamangalisa kwaye kufuneka unxitywe ngenwele kude kuye ekugqibeleni.
Epheleleyo, isitayile se-DRM
I-Bear okanye i-Hipster Beard
Olu hlobo lweendevu kwaziwa njenge'Garibaldi'. Inokulunga kwaye iyathandeka kumadoda amaninzi, kwaye kubo bonke abo bangafuni ukwenza inkathalo eninzi kwaye yishiye inde ngokupheleleyo. Kwabaninzi iya kuba sisakhono esihle kuba inokufuna ukhathalelo oluninzi kunye nokuzingisa. Kodwa kwabanye inokuba lelinye ilungu lomzimba wabo ekufuneka lilungiswe amaxesha ngamaxesha kubude beadevu zabo kunye nobude bayo.
Iindevu zesimbo esivaliweyo
Yeyona ntshebe ishiye imile yebhokhwe. Ifuna ukhathalelo lwemihla ngemihla ngoncedo lwesitshetshe esikhulu okanye sokucheba, iya kuchazwa ude ufune imbonakalo oyifunayo, engaphumiyo kwisitayile. Ibandakanya ukuyeka iinwele zikhule zijikeleze umlomo ukuze umanyanise kuphela ibhokhwe kunye nemadevu kwaye ungavumeli naluphi na unwele lukhule ezidleleni nasezidleleni.
Yeyona yendalo kwaye lolona lubhejo kakhulu kubo bonke ubuso. Kwaye kulula njengokuvumela iindevu zakho ukuba zikhule usuku olunye, ukuze uhlale ulingana. Ayinayo enye imfihlakalo, kuba kufuneka uyiyeke ikhule apho ikhula khona ngokwendalo. Incakuba iyakunceda ukuba uchebe ubude beendevu zakho xa kufuneka njalo.
Isitayile sePadlock kunye neendevu zeentsuku ezintathu
Iindevu zesimbo seBandholz
Ngenye indlela yokunxiba ubuso obunoboya obuninzi, ngaphandle kokusika okanye izilungiso ukwenza isitayile seBandholz, esenziwe ngumyili waso uEric Bandholz. Yintoni eyahlukileyo ngale ndevu? Yindlela yakhe ende kwaye inabantu abaninzi iindevu ezinkulu, ezinkulu, ezigqithileyo zisongekile, kuzo zombini iziphelo.
Uhlobo lukaVan Dyke
Kuthatha i-morphology yayo kwisitayile esinikwe ngumzobi u-Anthony Van Dyke. Inenkangeleko efanayo nesitayile sokutshixa, kuphela Jonga ibhokhwe kunye nentshebe ichetyiwe ngokupheleleyo emacaleniOko kukuthi, ezidleleni nasemhlathini. Isitayile esingaqhelekanga, kodwa kwangaxeshanye sihle.
Isimbovu seBandholz kunye nesitayile sikaVan Dyke
Uyinxiba njani intshebe kuxhomekeka imo yobuso
Akuthandabuzeki kukho ubuso obuvuma phantse naluphi na uhlobo lweendevu, kodwa ezinye kufuneka zisikwe kwaye zenziwe ngokuchanekileyo, kuxhomekeke kubume bobuso. Ubuso obuseqanda Ngokufanelekileyo zonke iintlobo zeendevu zivunyelwe. Unokukhetha isitayile kwaye uzame ukuba asenzi ubuso obujikelezileyo, ukuba kunjalo, kufanelekile susa ivolumu kwi-sideburns kwaye ushiye indawo yesilevu ixesha elide.
Kubuso obude Kuya kufuneka ujonge ulingano, kufuneka uwenze banzi amacala, ukushiya ukubuyela ecaleni kusondele ngakumbi kwaye indawo yesilevu imfutshane kakhulu. Ubuso obujikelezileyo Uya kubheja ngokucheba amacala obuso, oko kukuthi, inxenye yezidlele, kwaye ayinike imbonakalo ende, ishiye ibhokhwe.
Kubuso besikwere Kuya kufuneka ushiye iinwele ezininzi ngakumbi kumbindi wesilevu kwaye wehlise amacala. Okwezo Ubuso obunxantathu Kuya kufuneka wenze amanqaku athambile kwaye oku kukhetho olufanelekileyo nxiba iindevu, ihlala ine-gradient elungileyo. Ukhetho lwazo zonke izinto onokukhetha kuzo lungaphezulu kokuhanjiswa, ukuba usathandabuza kwaye ufuna ukwazi ukuba kunyanzelekile ukuba unxibe iindevu okanye hayi, ungasifunda apha esi sixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Izimbo zeendevu
Undijonge wajonga ecaleni msinya